Portal Drop, lalao mampiankin-doha izay tsy maintsy hanesoranao ny sombin-javatra | Androidsis
Portal Drop dia lalao mampiankin-doha izay miorina amin'ny tsangan-kevitra tsotra handeha manala chip mba hianjera ny baolina noho ny vokatry ny hery misintona. Ny lalao iray amin'ireo fiankinan-doha izay miaraka amina fotony tsotra dia afaka mitaona antsika hilalao lalao iray hafa tsy mijanona.
Tsy vao sambany mahita an'ity karazana lalao ity isika, nanomboka Ny Portal Drop dia manome ny hafa fomba miloko izay tsy maintsy anorenantsika tilikambo fa tsy handrava azy ireo tahaka ity iray ity. Ny fahasamihafana lehibe dia ny tsy maintsy hampidinantsika ny baolina mankany amin'ny iray amin'ireo sisiny mba hahatratrarany ny iray amin'ireo wormholes hamoahana azy io.
1 Ny fiankinan-doha dia mampiankin-doha
2 Portal Drop, lalao hanandrana
3 Miaraka amin'ny mozika elektronika mahafaly
Ny fiankinan-doha dia mampiankin-doha
Ny Portal Drop dia mifototra amin'ny fizika zavatra ahafahany manao izany velomy hatrany ny baolina izany dia milatsaka tsy an-kijanona amin'ny andian-taila izay mifono ampy hananganana iray lehibe kokoa. Hampitsahatra ny fiveziveziny amin'ny fotoana fohy ny baolina, mba hamongorana ny sombintsombiny mety hianjera amin'ny toerana mety. Amin'izany no hahitantsika ny làlana ilaina mba hidirany amin'ireo kankana ireo.
Ho lasa piozila ity, toy ny mila manapa-kevitra haingana isika hoe iza amin'ireto tabilao manaraka ireto mila manafoana isika. Azontsika atao ihany koa ny manala ny sasany izay ambany kokoa mba hamokatra vokany, ary amin'izany dia tonga any amin'ny nalehany ihany ny baolina.
Mekanika lalao tsotra, fa afaka izany miteraka fialamboly betsaka isa-minitra mba hanaovana ity lalao antsoina hoe Portal Drop ity. Ny tsy fahombiazan'ny lalao miaraka amin'ny fivezivezin'ny baolina sy ireo sombin-kazo ireo izay miteraka slide hafa koa, izay mahatonga ity lalao ity ho tsara, na dia tsy betsaka aza ny fampidinana ao amin'ny Play Store, mampanantena izy.
Portal Drop, lalao hanandrana
Manana ny baolina manampy endrika sarotra kokoa ny endrika hexagonal mankany amin'ny Portal Drop. Satria na ny sombintsombiny esorintsika aza dia ho afaka "hikapoka" azy io ary hiteraka famindran-toerana vaovao mandra-pahatongantsika ny lalao. Ireo toe-javatra isan-karazany ireo dia mahatonga ny Portal Drop ho lalao tena tsara izay tsy mila frills marobe sy andiana fanampiny toy ny hoditra samihafa azo, lasa lalao iray manontolo ny manana fotoana mahafinaritra ao amin'ny pisinina.
Manantena izahay fa misy lohateny maro kokoa mitady originality amin'ny fomba na manome fihodinana amin'ireo mekanika lalao izay fantatsika rehetra amin'ny lalao an'arivony. Sarotra izany, satria tsy mipoitra toy izany ny hevitra satria toa izany. Ny zavatra tsara indrindra dia ny falifaly manana tolotra fialamboly vaovao toa ilay naroson'ny Portal Drop.
Toa an'i Flappy Bird, tanjon'ny Portal Drop hafa ny mahazoa isa betsaka indrindra ary andao hizara ireo sary nalaina tamin'ny namana sy fianakaviana. Amin'izany no ahafahantsika manindrona amin'izy ireo mba hahitana hoe iza no tena mahay mitandrina ny baolina velona sy ny fandaka.
Miaraka amin'ny mozika elektronika mahafaly
Teboka iray hafa manohana ny Portal Drop no mozika elektronika ao aminy Izay mametraka ny mangatsiaka amin'ny mofomamy izay ny lalao ihany. Ny fahefana hananana an'io mozika ambient miaraka amin'ireo baomba ireo sy ireo gadona ireo dia tsy mandeha tsara aminy. Ankoatry ny zava-misy fa rehefa mahazo teboka bebe kokoa isika, dia hahazo vokatra sary manaitra kokoa isika mba hanazavana fa manitsakitsaka ny firaketantsika manokana isika.
Amin'ny fanatanterahana ara-teknika ny zava-drehetra dia lavorary miaraka a fizika zavatra nohamarinina tsara ary sary vitsivitsy izay miorina amin'ny fomban'io Portal Drop io. Tianay ny hanana fiaviana samihafa, ny fahaizana manova ny fomba fahitana iray manontolo, toy ny amin'i Cubriko, ny fanolorana fialamboly vaovao avy any Ketchapp.
Portal Drop dia lalao ankamantatra izay misy fizika ary ny mozika elektronika dia mahavariana antsika ka milalao azy mandritra ny andro maromaro mandra-pahatongantsika ho tsara indrindra ary tsy misy olona maharaka antsika.
Ny mekanika lalao
Fizika tsara ampiasaina
Ny fampahafantarana sambatra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Afindra ny taila hanefy ny baolina amin'ny lafiny iray amin'ny Portal Drop